Imisa muddo ayey qaadan lacag wareejinteyda / diriddeyda? – Transfer Galaxy
Lacag wareejinteyda / xawaalad dirideyda
Lacag wareejinta / xawaalad dirida socota
Imisa muddo ayey qaadan lacag wareejinteyda / diriddeyda?
Lacag wareejinta / xawaalad dirida ee lagu diro iyadoo la isticmaalaya Transfer Galaxy caadi ahaan waa isla-markiiba/degdeg laakiinse waxaa jira kala duwanaan yar marka ay noqoto dowladdaha iyo bixiyayaasha. Waxii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo bogagga u gaarka dowlad walba ee aad ka heli halkan SU'AALAHA BADANAA LA ISWEYDIIYO (FAQ).
Waxaa jiri kara xaaladdo ka baxsan awooda Transfer Galaxy ee saameyn kara lacad wareejinta/xawaalad dirida, sida dhibaato ah xagga korontada, isgaarsiinta, xiriirka internetka iwm. Haddii aan la kulanto dhibaatooyin, fadlan la xiriir kooxda Taageerida Macaamiisha.
3 din 14 au considerat acest conținut util